Ny efijery sy ilay mpiaro ny Xiaomi Redmi Note 6 dia efa tafaporitsaka | Androidsis
Ny efijery an'ny Xiaomi Redmi Note 6 dia tafaporitsaka: 6.18 ″ tontonana misy ny lohany
Miaraka amin'ny fahombiazana lehibe amin'ny andian-dahatsoratra Redmi Note an'ny Xiaomi ary, mihoatra ny, ny Redmi Note 5, ny orinasa dia tsy hitsahatra ny hanavao ity fianakavian'ny telefaona ity. Azontsika atao ny manome toky azy ity aorian'ny fivoahan'ny efijery terminal farany teo, izay azonay nakarina noho ny ekipa SlashLeaks (/ Leaks).
Miaraka amin'ity famoahana ity, ny mpiaro azy koa dia nanjary mazava, manome antsipiriany a notch mitsivalana lava izay ahitantsika lavaka telo. Izy io dia miantoka fa an'ny fitaovana izy io, satria mifanaraka tsara amin'ny tontonana izy ary manome antsika antony hiheverana fa miasa amin'ny finday ity orinasa ity, izay havoaka amin'ny fiandohan'ny taona.
Araka ny sary voasivana sy ny angon-drakitra, ny diagonal an'ny efijen'ity terminal ity dia 6.18 santimetatra ny halavany. Ity, miaraka amin'izay, araka ny efa nolazaintsika, dia manana notch izay misy ny mpandahateny miantso sy sensor roa, izay mety ho an'ny sary, na iray ihany natokana ho an'ny fakan-tsary voalohany ary iray hafa ho an'ny akaiky. Miandry ny zava-drehetra.
Tsara ny manamarika fa tsy manome antoka ny hanana Redmi Note manaraka ity ny orinasa sinoa miseho amin'ireo toetra ireo. Na izany aza, fampahalalana tena lehibe momba ity fitaovana ity Ary, raha raisintsika ny toetran'ny teo alohany sy ny fironana ankehitriny, dia azo inoana fa hametraka an'ity tontonana ity amin'ny Redmi Note 6 i Xiaomi, na farafaharatsiny, mitovy aminy sy mitovy habe aminy hanavaozana ny endrika.
Farany, tsara fa ny refin'ity singa ity dia mihoatra ny 5.99 santimetatra izay ireharehan'ny Redmi Note 5, satria tsy misy antenaina antenaina kokoa. Toy izany koa ny zava-misy fa ny marika dia misafidy sisin-tany tena tery sy kely. Toy izany koa, tsy afaka matoky tanteraka ity fanambarana ity isika. Mba hanaovana izany dia mila miandry zavatra mivaingana kokoa isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny efijery an'ny Xiaomi Redmi Note 6 dia tafaporitsaka: 6.18 ″ tontonana misy ny lohany
Fortnite dia efa napetraka amin'ny fitaovana Android maherin'ny 15 tapitrisa